Wadahadalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo lag... | Universal Somali TV
Wadahadalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo laga cabsi qabo in uu Fashilmo
Waxaa sii kordhaya qilaafka u dhaxeeya dowlada Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kadib markii Mareykanka gacanta ku dhigay Markab laga leeyahay Kuuriyada Waqooyi.
Todobaadkii hore ayaa war saxaafadeed ka soo baxay waaxda cadaalada Mareykanka lagu sheegay in markabka uu ku soo xadgudbay dhulka Mareykanka iyadoo wali kuuriyada waqooyi ay saarantahay cunna qabateyn caalami Ah.
Markabkaan ayaa markii hore lagu qabtay wadanka Indonesia bishii April sanakii 2018-da.
Afhayeen magaciisa aan sheegin oo u hadlay wasaarada Arimaha dibeda kuuriyada waqooyi ayaa u sheegay wakaalada wararka ee dalkaasi in Mareykanka uu qiyaamay kadib kulankii sanadkii la soo dhaafay dhexmaray madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiye Kim Jong Un.
Qilaafkaan cusub iyo markabkaan Mareykanka qabtay ayaa ku soo aadaysa saacado kadib markii khamiistii hore ay kuuriyada waqooyi tijaabisay laba gantaal oo meelo fog Gaaraya.
Tan iyo markii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu booqashada ku tagay dalka Ruushka laba todobaad ka hor ayaa waxaa mugdi sii galay xiriirka Peyonyang iyo Washington oo la filayay in uu soo Hagaago.
Kan-xigaDibadbaxayaasha Suudaan oo loogu baaq...
Kan-horeUrurka Xisbullah oo sheegay in Mareyk...
54,080,074 unique visits